Global Voices नेपालीमा » के तपाईं यी ८ अफ्रिकी खाना खानसक्नुहुन्छ ? · Global Voices नेपालीमा » Print
के तपाईं यी ८ अफ्रिकी खाना खानसक्नुहुन्छ ?
अनुवाद पोष्ट गरिएको 12 सेप्टेम्बर 2019 16:41 GMT 1	 · लेखक Ndesanjo Macha अनुवादक Sanjib Chaudhary
श्रेणी : उप-सहारा अफ्रीका, केन्या, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, तान्जानिया, बुरुन्डी, मलावी, युगान्डा, खाना, नागरिक मिडिया
मोपाने किरा। निःशुल्क प्रयोगका लागि राखिएको आर्ने लार्सेनको तस्वीर।
ग्लोबल भ्वाइसेजको खानाबारे रिपोर्टिङ गर्ने महिनाको अन्त्यमा हामी यस्ता ८ सबसहारन परिकारबारे चर्चा गर्दैछौ जसले तपाईंलाई सधैंको खान्कीबाट धेरै पर लग्नेछन्। र, हामी तपाईंलाई ती खाना चाख्न आग्रह गर्छाै।
१. मदोरा (मोपाने किरा):
खानका लागि तयार मिठो मोपाने किरा। www.zimbokitchen.com बाट अनुमतिमा प्रयोग गरिएको तस्वीर।
मदोरा  Gonimbrasia belina) दक्षिणी अफ्रिकामा पाइने एक प्रकारको रात्रिकालीन पुतली हो। मोपानी वा मोपाने भनिने यस पुतलीको खान मिल्ने झुसिलकिरा लाखौं दक्षिणी अफ्रिकी आदिवासी जनजातिका लागि प्रोटिनको भरपर्दो स्रोत हो।
यदि तपाईं यो किरा चाख्न चाहनुहुन्छ भने जिम्बो किचनका यी  निर्देशनमा भनिएझै गर्नुहोस्:
यी किरादेखि पर नभाग्नुहोस्। मदोरामा डाक्टरले भने जतिकै प्रोटिन पाइन्छ। वेबएमडिका अनुसार — “प्रोटिन मानवशरीरका प्रत्येक कोशिकाको महत्वपूर्ण अंश हो। कपाल र नङ मुख्यतया प्रोटिनले बनेका हुन्छन्। हाम्रा शरीरलाई कोशिकाका समूह बनाउन वा मर्मत गर्न प्रोटिन चाहिन्छ। एन्जाइम, हर्मोन र अन्य शारिरीक रशायनका लागि पनि प्रोटिन चाहिन्छ। साथै, हड्डी, मांसपेशी, कुर्कुरे हाड, छाला तथा रगत बनाउनका लागि पनि प्रोटिन अति महत्वपूर्ण रहेको छ।” त्यसैले होला सायद ग्रामीण जिम्बाब्वेका बासिन्दा हामी शहरियाले भोग्ने गरेका रोगव्याधिबाट बच्छन्।
जिम्बाब्वेमा यसलाई साधारणतया यी किराहरूलाई तारेर स्वादिष्ट परिकार तयार पारिन्छ। आज म त्यसरी नै पकाउन गइरहेको छु, मात्र यसमा मरीच मिसाउँदैछु। यो सम्मिश्रण रोज्नुभयो भने साह्रै मिठो हुन्छ: साद्जा (दक्षिणी अफ्रिकी दलिया), हरियो सागपात, र मबुया गोलभेंडा र प्याजको सुपका साथ यसलाई खान सक्नुहुन्छ नत्र खाजाका रूपमा कुरुमकुरुम निस्तै खाए पनि हुन्छ वा अन्य सम्मिश्रणका साथ खाए पनि हुन्छ। अब, यसलाई भुट्नतिर लागौं।
फट्यांग्रा। क्रियटिभ कमन्स लाइसेन्सअन्तर्गत विकिपिडियाका लागि ब्रुस मार्लिनको फोटो।
युगाण्डामा बोलिने लुगाण्डा भाषामा लामा एन्टिना भएका फट्यांग्रालाई “एनसनेने ” भनिन्छ र मध्य युगाण्डामा यसबाट अति मन पराइने परिकारका बनाइन्छ र यसलाई अत्यन्त महत्वपूर्ण आयस्रोतका रूपमा लिइन्छ। यो किरा केन्या, रुवान्डा र तान्जानियामा पनि खाइन्छ।
यसको परिकार बनाउन यी सात बूंदा मा भनिएझै गर्नुहोस्।
अफ्रिकन पाहा। क्रियटिभ कमन्स लाइसेन्सअन्तर्गत विकिपिडियाका लागि स्टीभनजेको फोटो।
साइन्स इन अफ्रिका ब्लगले नामिबियामा भ्यागुता कसरी खाइन्छ भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ :
नमिबियाको परम्परागत परिकारमा सम्पुर्ण भ्यागुतो खाइन्छ। भ्यागुताको पाचननली चाहि कुकुर वा कुखुरालाई दिइन्छ।
सामान्यतया ठुला पाहाले टर्रटर्र गरी कराउन थालेपछि वा “तेस्रो झरी” परिसकेपछि मात्र भ्यागुता खाने सल्लाह दिइन्छ। तर पनि केहि ठाउँमा समयभन्दा पहिले नै भ्यागुताहरू खाइन्छ। यद्यपि यसबेला भ्यागुता खानुभन्दा अगाडि साधारणतया विशेष विषनिरोधक सावधानी अपनाइन्छ।
उत्तरी नामिबियाको ओशाकाटी ओङवेडिवा क्षेत्रका मानिस विषनिरोधका लागि खाना पकाउने भाडाभित्र ओमुहोङगो (ओमुऊङगो भनिने मरुलाको रूखभन्दा भिन्न) भन्ने रूखको सुख्खा काठका टुक्राको चाङ राखिन्छ। यस काठले भ्यागुताको विषलाई प्रभावहीन बनाउनुका साथै भ्यागुताको छालालाई भाडाको पिँधमा टासिनबाट रोक्छ। यस प्रकारले पकाउँदा कोही पनि बिरामी हुँदैन। ओकाबेम्बे ओशिकांगो क्षेत्रका बासिन्दालाई ओमुहोङगो रूखबारे थाहा नभएकोले त्यहाँ ओमुवा र ओशिपेके रूखका काठ प्रयोग गरिन्छ। भ्यागुता पकाउँदा ओमुवा वा ओशिपेके रूखका काठका दुई साना टुक्रा भाडाको पिँधमा राखे पनि त्यसले रोगबाट बचाउँछ।
४. माजोन्दो (गोरुका खुट्टा):
खानका लागि तयार माजोन्दो (गोरुका खुट्टा)। www.zimbokitchen.com को अनुमतिमा तस्वीर प्रयोग गरिएको।
धेरैजसो जिम्बाब्वेली पुरुष र केही महिलाका लागि पनि माजोन्दो (गोरुका खुट्टा) मनपर्ने खाना हो। यदि दाउरा प्रयोग नगरिकन पकाउने हो भने भने यसलाई बिस्तारै हल्का आँचमा पकाउनुपर्छ। यो परिकार पकाउन खासै गाह्रो छैन। सुंगुरका खुट्टा, मागुरु (मासुको परिकार) वा गोरुको सुरुवा पकाएझै गरी यो परिकार जिम्बाब्वेमा पकाइन्छ।
सुडानमा पाइने धमिरा (सेता कमिला)। संयुक्त राज्य अमेरिकाको कृषि विभागको कृषि अनुसन्धान सेवाद्वारा सार्वजनिक डोमेनमा उपलब्ध गराइएको तस्वीर।
कमिलासँग कुनै सम्बन्ध नभए पनि धमिरा लाई “सेता कमिला” पनि भनिन्छ। धेरैजसो अफ्रिकी संस्कृतिमा यसलाई स्वादिष्ट परिकारका रूपमा लिइन्छ।
उड्ने धमिरालाई भुट्ने तरिका (चित्रसहित) यहाँ  हेर्नुहोस्।
६.रगत र दुध:
थम्सन सफारिज ब्लग लेख्छ :
[…] तर आलो रगत, पकाएको रगत र रगत दुधको सम्मिश्रण खाने अचम्मको परम्परा [मासाई खानाबारे] (साथै पश्चिमा जिब्रोका लागि अलिक नमिठो) छ।
यसरी  गाईको रगत झिकिन्छ:
उनीहरू [मासाई] गाईको घाँटीमा रहेको थलथले छालामा बाण रोपेर चुहाइएको रगत र दुध मिसाएर खान्छन्। एक भाँडा (लौका जत्रो)जति रगत जम्मा गरेपछि बाण रोपिएको घाउ पुरिन्छ। गाईलाई कुनै हानिनोक्सानी नपुर्याई यो संकलन कार्य हरेक महिना गर्न सकिन्छ। मासाईहरू खास गरेर दुधमा रगत मिसाएर पिउछन्।
के तपाईं यो चाख्न सक्नुहुन्छ ? रगत र दुधको सम्मिश्रण यसरी  बनाउनुहोस्:
गाईको रगत ताजा वा अमिलो भइसकेको दुधसँग यसरी पकाउन सकिन्छ: आलो रगत चाल्नीबाट खन्याउनुहोस् र जमेको रगत छुट्याउनुहोस्। तीन भाग तरल रगतमा एक भाग दुध मिसाउनुहोस् (अथवा बराबर रगत र अमिलो भइसकेको दुध)। यस सम्मिश्रणलाई मन्द आँचमा बीचबीचमा चलाउदै बीसदेखि तीस मिनेटसम्म पकाउनुहोस्। पकाउदै जाँदा यो सम्मिश्रण अण्डाको भुर्जीजस्तो हुन्छ। मन लागेमा यसमा बटर, काटेको प्याज वा नुन हाल्न सकिन्छ। यसलाई उगाली, फुफु, वा उसिनेको केरा वा भातसँग खान सकिन्छ।
मुसा उत्तरी मलावीको मन पराइने परिकार हो। त्यहाँ यसलाई “मबेवा” भनिन्छ, साथै पूर्वी जाम्बियामा पनि यो परिकार मन पराइन्छ।
पिटर लार्सनले बनाएको तलको युट्युब भिडियो मा बेच्नका लागि राखिएका पोलिएका मुसा हेर्न सक्नुहुनेछ:
“मबेवा”को बारेमा लेख्दै, पिटर भन्छन् :
मबेवाका फाइदाका बारेमा मलावियनहरू विभाजित छन्। धेरैले मबेवा मन पराउछन् र यसलाई मिठो खाजा मान्छन्। अरूले चाहि यसलाई खान नहुने ठान्छन्। मबेवालाई समातिसकेपछि आगोमा पोलिन्छ, तर धेरै बेरसम्म नपोलिने हुनाले जीउमा नडढेका रौँ देख्नसकिन्छ। मलावियनहरूले यसमा नुन र रातो खुर्सानी मिसाई हड्डीसमेत सिङ्गै चपाउछन्।
मुसा खाने परम्परासँग जोडिएका सामाजिक तथा सांस्कृतिक आयाम जान्नका साथै आफ्नो डिनरका लागि मुसा कसरी मार्नेबारे यो ब्लग  पढ्नुहोस्।
८.खजूरको रूखमा पाइने लार्भा:
तपाईंलाई भोक लागेको छ भने यो किरा टिप्नुहोस्! लुइगी बार्राकोद्वारा क्रियटिभ कमन्सअन्तर्गत उपलब्ध गराइएको तस्वीर।
खजूरको रूखमा पाइने लार्भालाई स्वादिष्ट ट्रपिकल परिकारका रूपमा लिइन्छ र यो प्रोटिनको भरपर्दो स्रोत हो ।
क्युजिन ओ कामेरमा भनिएको निर्देशन अनुसार खजूरको रूखमा पाइने लार्भाको स्वादिष्ट परिकार तयार पार्नुहोस्:
लर्भालाई पानीमा राम्ररी पखाल्नुहोस्, लार्भालाई आफ्ना औंलाको मद्दतले फट्याउनुहोस् र त्यसभित्र रहेको खैरो तरल पदार्थ निकालेर फाल्नुहोस्।
प्रत्येक लार्भालाई सोझै पकाउने भाँडामा राख्नुहोस् (खैरो तरल पदार्थले तपाईंको हातमा दाग बसाए चिन्ता नलिनुहोस्, यो रंग धोएपछि जान्छ)।
बाँकीका सामग्रीहरू थप्नुहोस्: लसुन, अफ्रिकन तुलसी, प्याज, पेबे (क्यामरूनमा पाइने एक स्थानीय मसला), अदुवाका पात। लार्भा मिसाएर मन्द आँचमा पकाउनुहोस्। २०–३० मिनेटसम्म लार्भा नगलेसम्म पकाउनुहोस् र पस्कनुहोस्।
URL to article: https://ne.globalvoices.org/2019/09/12/2471/
 सात बूंदा: http://globalvetsuganda2013.blogspot.com/2013/06/how-to-cook-grasshoppers-in-8-easy-steps.html
 उल्लेख गरेको छ: http://scienceinafrica.com/old/index.php?q=2004/january/bullfrog.htm‎
 युट्युब भिडियो: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=rqGOvpDlkzY
 यो ब्लग: http://people.bridgewater.edu/~mtembo/menu/food/mice.shtml
 स्वादिष्ट ट्रपिकल परिकारका रूपमा लिइन्छ र यो प्रोटिनको भरपर्दो स्रोत हो: http://jamesagbogun.hubpages.com/hub/Edible-Maggots-Tasty-Palm-Tree-Weevil-Larvae